Sergio Ramos oo ilinta ceshan kari waayey kolkii uu ku jiray Shirkii jaraa’id ee uu ku macsalaamaynayey Real Madrid – Gool FM
Haaruun June 17, 2021
(Madrid) 17 Juun 2021. Sergio Ramos ayaa ilintiisa ceshan kari waayey intii uu ku jira jiray Shirkii jaraa’id ee uu maanta ku macsalaameynayey Kooxda Real Madrid.
35-sano jirkaan, kaasoo 16-kii sano ee la soo dhaafay kooxda isla markaana Kabtan u ahaa ayaa sheegay in Los Blancos uu dhowaa ama dheeraba ay dib isku arki doonaan oo uu dib ugu soo laaban doono ka hor inta uusan dhihin macsalaamo.
“Waqtiga ayaa yimid, waa mid ka mid ah kuwa ugu adag noloshayda; waxaa la gaaray waqtigii aan macsalaamayn lahaa Real Madrid. Waxaan imid aniga oo gacmaha iska haysta aabbahay …,” ayuu yiri Ramos ka hor inta aanu ilmayn.
“Waa wax aan macquul ahayn inaan qiiroodo, waxaan jeclaan lahaa inaan ku macsalaamo garoonkeenna, garoonka [Estadio] Santiago Bernabeu.
“Waad mahadsan tihiin Real Madrid, marwalba waxaad ku jiri doontaa qalbigeyga, waa dhammaadka xilligii cajiibka ahaa ee nolosheyda u gaarka ahaa, iyo bilowga xilli rajo iyo mustaqbal leh iyo hamiga weyn ee ah inaan muujiyo sida ugu fiican sanado badan, inaan imaado iyo inaan awoodo inaan koob kale ku daro liiska Koobabka.
“Waxaan rabaa inaan Mahadsanid iraahdo qof kasta, tani waxay ka badan tahay macsalaameyn ee waa inaan mar dambe is aragno maxaa yeelay waan soo noqon doonaa.” ayuu hadalkiisa ku sii daray Ramos.
Sergio Ramos ayaa Los Blancos kula guuleystay 22 koob iyadoo 12 ka mid ah koobabkaas uu la qaaday Real Madrid isagoo Kabtan ah.
Florentino Perez: "Ma’ahan maalin sahlan, Ramos marwalba Real Madrid waxay noqon doontaa Gurigaaga"